Antony 5 mahatonga ny Roman Reigns sy Seth Rollins tsy maintsy hamandrihana amin'ny adin'ny lohateny ao amin'ny WWE SmackDown - Wwe
Antony 5 mahatonga ny Roman Reigns sy Seth Rollins tsy maintsy hamandrihana amin'ny adin'ny lohateny ao amin'ny WWE SmackDown
Araka ny voamarina tao amin'ny WWE SmackDown tamin'ny herinandro lasa teo, ny Roman Reigns dia hametraka ny Tompondaka Iraisam-pirenena eo amin'ny tsipika mifanohitra amin'i Edge amin'ny Money in the Bank pay-per-view. Ity fanambarana ity dia nahazo fanehoan-kevitra mifangaro avy amin'ny WWE Universe, fa i Seth Rollins kosa dia tsy faly manokana. Nokapohiny ny orinasa noho ny fanapaha-kevitr'izy ireo ary nilaza izy fa tokony ho izy ny mpihaona an'i Reigns manaraka.
Nahatonga ny rehetra hiresaka momba ny mety hisian'ny fifandonana eo amin'ireo superstars roa ao amin'ny SmackDown, ary koa ny famandrihan'i WWE momba an'io tantara io. Seth Rollins sy Roman Reigns dia niampita lalana tamin'ny marika Blue tato anatin'ny volana vitsivitsy raha nifandona tamin'i Cesaro ny The Tribal Chief. Ny fivorian'ny efijery, na dia fohy aza, dia nahatonga ny mpijery hiresaka foana. Hanao fifanandrinana amina lohateny ve ny Reigns sy Rollins?
Asa lehibe avy amin'i Seth Rollins eto. Ny adiny amin'i Edge amin'ity fahavaratra ity dia hanana promos mpamono olona. #Smack down pic.twitter.com/DanoFVzCNP
- Louis Dangoor (@TheLouisDangoor) 26 Jona 2021
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny antony lehibe indrindra tokony hametrahan'ny WWE boky Roman Reigns sy Seth Rollins amin'ny fifanolanana an-tsokosoko ao amin'ny SmackDown.
# 5 Ny tantara teo amin'ny Roman Reigns sy Seth Rollins
Roman Reigns sy Seth Rollins dia nifankahalala efa ela
Efa ho folo taona lasa izay, ny Roman Reigns dia namakivaky ny vahoaka niaraka tamin'i Seth Rollins sy Dean Ambrose (AEW Superstar Jon Moxley) tao amin'ny Survivor Series 2012. Niditra an-tsehatra tamin'ny hetsika lehibe izy ireo ary nanampy an'i CM Punk hitazona ny Tompondakan'ny WWE. Ny alin'iny, ny WWE Universe dia natolotra tamina ankolafy vaovao lehibe - The Shield.
Roman Reigns sy ny mpiara-dia aminy dia nitanjozotra namakivaky ny lisitra iray manontolo ary vetivety dia tafakatra ambony. Nandritra ny taona vitsivitsy ho avy, ireo superstars telo ireo dia nahita fiakarana marobe teo amin'ny lazan'izy ireo. Niaraka izy ireo, tsy azo sakanana mandra-pilan'i Seth Rollins niandany tamin'ny The Authority ary namadika ny rahalahiny Shield.
Nilaza fotsiny i Seth Rollins fa maniry ny hanjakan'ny Romanina amin'ny Tompondakan'i Universal.
Omeo anay izany. #Smack down pic.twitter.com/iUa8DBIIxi
- CONNER (@VancityConner) 26 Jona 2021
Ny ankolafy dia nisy fihaonana tsindraindray teo anelanelan'ny 2017 sy 2019 talohan'ny nandaozan'i Ambrose WWE. Saingy tsy azo lavina fa ny fivadihan'ny voditongotr'i Rollins dia nanova ny fampitovizany mandrakizay. Izy io koa dia nitarika ny The Architect nametraka ny tenany ho iray amin'ireo voditongotra tsara indrindra amin'ny orinasa.
Na dia efa fito taona izao taorian'ny nanambaran'ny Triple H ny drafitra B manafintohina nataony tamin'ny fizarana tsy hay hadinoina tamin'ny RAW tamin'ny 2014, dia mbola azo hamarinina raha toa ka manapa-kevitra ny Roman Reigns fa hanangona ny vola tokony harahina ankehitriny.
Sambany hatramin'ny nisarahan'ny The Shield, Reigns dia nifarana tamin'ny vahoaka tokoa. Izy dia iray amin'ireo voditongotra tsara indrindra amin'ny orinasa iray manontolo, ary izao no fotoana mety indrindra hamandrihana azy sy i Rollins amin'ny fifaninanana tsy hay hadinoina. Ity farany dia nanao an-keriny imbetsaka ny fotoana lehiben'ny Reigns taloha. Ny Lehiben'ny Foko izao dia afaka mandamina isa tranainy amin'ny alàlan'ny fifandonana amin'ny Universal Championship.
Seth Rollins dia nianjera tamin'ny hetsika lehibe teo anelanelan'ny Brock Lesnar sy Roman Reigns mba hividianana vola ao amin'ny kitapom-bolany ao amin'ny kitapom-bolan'ny Banky sy i Stomp Roman Reigns hahazoana ny Lohateny WWE ary hanakatona ny WrestleMania 31.
29 martsa 2015
29 martsa 2020 pic.twitter.com/MsS34qaCNy
- P̷u̷n̷k̷.̷ ̷ (@TheEnduringIcon) 29 martsa 2020
Ny Roman Reigns sy Seth Rollins dia mahafantatra tsara ny antsipiriany rehetra momba ny tsirairay, izay mitaky fizarana manaitaitra maro. Ny nostalgia fotsiny manodidina ireo superstars roa dia ho ampy hitazomana ireo mpankafy hampiasa an'ity tantara ity.
Roman Reigns dia mila mpifaninana vaovao aorian'ny vola ao amin'ny Banky, ary tokony ho i Seth Rollins. Ny tantaran'izy ireo taloha dia tsara loatra ka tsy raharahina ary manolotra zavatra maro izay mety hiditra amin'ny tantaram-piainan'izy ireo ankehitriny.
ahoana no hilazana amin'ny olona sandoka
ahoana no hilazana raha mahafatifaty anao
ny fomba anontaniana azy amin'ny alàlan'ny lahatsoratra
firy taona ny vady sylvester stallone
rahoviana no ho ao amin'ny netflix ny originals season 4